Macaan - Gpedia, Your Encyclopedia
Kani maqaal ku saabsan macaanka. Bogag kale fiiri dhadhan
macaanku wuxu ka mid yahay dareenka
Macaan (Af-Ingiriis: sweetness) waa mid ka tirsan shanta nooc ee dhadhanka ee ka midka ah "Shanta Laxaad" ee dadka. Macaanka waxaa loo aqoonsadey dhadhan raaxo iyo macaansi u leh dadka isla markaana raaxo iyo raynrayn muujiya. Noocyada cuntada ka kooban kaarbonhaydarate sida sonkorta ayaa laga helaa macaanka, inkastoo ay jiraan ilo kale oo khiyaali ah oo laga helo dhadhanka macaanka.
Sidoo kale, dhadhanku waa dareenka uu sheego carabku markuu shay la falgalo. Neerfaha iyo xididada Dhadhanka oo uu la socdo xubnaha urta ayaa sheega nooca dhadhanka shey. Dhadhanku wuxuu ka mid yahay shanta laxaad ee dadka iyo xayawaanku leeyihiin. Dhadhanku waa dareen uu bixiyo carabku markuu taabto walax sida cunto oo kale isla markaana maskaxda u tebiyo sida waxaldaasi tahay, taasi oo iyadna soo sheegta nooca uu yahay dhadhankiisu.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Macaan&oldid=188034"